Xeer Ilaaliyaha Guud oo soo bandhigay dukumiintiyo been abuur ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 1 September 2014
Mareeg.com: Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigay dukumintiyo been abuur ah oo ay sameysteen shaqsiyaad doonaya in ay bulshada ku qaldaan, kana been sheegaan hay’adaha dowladda.
Dr. Axmed Cali Daahir oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada amniga ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan shaqsiyaad si khaldan bulshada uga iibiya dokomintiyo been abuur ah, isagoo ka digay in shacabka lagu marin habaabiyo waxyaabo been abuur ah oo u keeni karta dhibaato.
“Dokomintiyadan halkaan yaala ee aad arkeysaan waa howl looga baahnaa inay dowladdu qabato, Laakiin dad ayaa si gaar ah u adeegsanaya, waxa aad arkeysaan waa dukumintiyo been abuur ah oo bulshada lagu qaldayo, waxaana ku jira kuwa loo sameeyay burcad badeed oo lagu qaldayo inay ka tirsanyihiin Kalluumeysatada Soomaaliyeed” ayuu yiri Dr. Axmed Cali Daahir.
Xeer Ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa tilmaamay in shaqsiyaadka howsha lagu soo qabtay lala tiigsan doono sharciga, isagoo tilmaamay in xafiiskiisu ay la shaqeyaan xafiisyo ay ka midyihiin hanta dhowrka, booliska, nabad sugidda iyo xafiisyo kale.